Mma - libya-canada.org
N’adịghị na Nkwupụta Ndị Dị Mma, Ndị Ọrụ Experts Blog abụghị ndị gọọmentị mechiri (mana anyị na-agbanye, agbanyeghị)
Ahhh, Ọ dị mma ịlaghachi.
Maka ndị nke gị nọ na-eche ebe ndị isi ụlọ ọrụ cha cha chara achacha bọọlụ ndị ọrụ Website bụ ọnwa ole na ole gara aga, ọ dị mma, ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ dream nke ụlọ ọrụ ahụ, bụ ndị nwere otu”Final Four,” na-etinye anyị.
Ozi ọma ahụ bụ… Ha kpagburu ha, ha ekwughachighikwa ya dịka ndị mmeri.
Gee, nke ahụ dị oke njọ.
Ya only – Ee, anyị abịaghachila, man’oge ezumike anyị, anyị emepela isiokwu ole d e ole iji tụgharịa uchen’izu, ọnwa na afọ na-abịanụ. Yep – Ebuola anyị. (Ed. Rịba ama: Nke ahụ abụghị ihe ijuanya. Na, maka ihe ndekọ ahụ, anyị chefuru ịgbanwe mgbanwe egwuregwu anyị na-eche n’echiche n’izu gara aga. Ọ bụ ya mere anyị ji nwụọ, anyị emeghị “kpagbuo.”)
Mana – Ebe ọ bụ na ọ ka bụ oge egwuregwu bọọlụ REAL, na ọ bụghị oge egwuregwu bọọlụ, anyị chere na ọ ga-abụ ezigbo echiche ịlaghachi na mgbọrọgwụ anyị miniature weghachite otu ederede ntanetị kachasị ewu ewu bụ akụkụ nke Website kemgbe, nke ọma, tupu a mụọ Website.
Aha ọjọọ anyị”Kwa Afọ Experts Casino Blog Super Bowl Amụma!”
Ugbu a, maka ndị nke na-edobeghị Super Bowl kwa afọ”dart-throw,” ndị ọrụ ebe a t Aces Casino Entertainment, makwaara dị ka ndị na-arụ ọrụn’ụsọ mmiri oroma kacha elu na mpaghara ọdịda anyanwụ, chere na ọ’ọ ga – abụ nnukwu echiche ịnye igwe mmadụ na amụma egwuregwu Super Bowl.
Ugbu a, anyị achọghị ka anyị bụrụ otu ndị only ụfọdụ nsogbu, wee chọpụta na anyị họpụtara otu ndị na-ezighi ezi, si otú a na-emebi aha anyị na azụmaahịa prognostication football.
Ya only, anyi kpebiri ịhapụ onye ọzọ họrọ onye mmeri anyị. Onye nwere onyinye impeccable, na anya maka ndị mmeri.
Anyị họọrọ Henny-Penny, ọkụkọ na-egwu ọkụ Knotts Berry Farm. Nke a bụ njikọ na nke ọkụkọ-oke-nhọrọ, na nhọrọ ndị sochirinụ, site n’ikike nke ndị isi ụlọ agba chara chara mmanụ agba agba, Aces Casino. (Ed. Rịba ama: nkwụnye ihere.)
Papa, ka ọzọ ziri ezi atụtụ.
Anyị achọtala njikọ ndị ọzọ na họpụta Super Bowl, ebe a t ebe a. Nke a bụ otu vid anyị hụrụ…
Website Id Henny-Penny, ruo Anastasia, na mpaghara niile dịn’akụkụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, anyị nwere ọsọ dị egwu na Super Bowl-thingy. Dika ị ghagodi na akwukwo Blog anyi gara aga n’isiokwu a, ugbua ka anyi jiri Honey, ihe nkpuchi nke ulo oru na onye ohuru ohuru, ka anyi mee nhoputa anyi. Na, ọ ga-eme un, t Tọzdee, Jenụwarị 31, nke a makwaara dị ka”Pick-time!”
Anyị ga-enwe njikọ ndị ọzọ na akụkọ Henny-Penny ebe a, mgbe anyị hụrụ han’ọtụtụ nnukwu akwụkwọ bishọp Experts Casino Blog, yabụ nọrọ na-ege ntị. Anyị ga-alaghachi na Tọzdee jiri goofiness ọzọ, siten’ikike nke Experts Casino Entertainment, ụlọ ọrụ kachasị mma nke ụlọ ịgba chaa chaa na mpaghara ọdịda anyanwụ!